Xisaabta | KONGOLISOLO
Maahan hal calaamad oo ku taal Galbeedka oo aan ka soo jeedin awowyaashii Madow / Afrikaanka: jaakad hub, iconography, astaamo diimeed iyo astaan ​​dowladeed (…) wax walba horay ayaa loogu isticmaali jiray Afrika tan iyo qarniyadii hore.
Posted By: KongoLisolowaa: July 16, 2020 03: 13 No Comments
1. Gorgorka: Calaamadda xoogga jannada, Magaalada ugufiican, Magaalada cirka ama magaalada dadka utopians sida Thomas More, New Air Age (…). Gorgorka ayaa ka muuqda hubka ...	Akhri wax dheeraad ah
Magaca hore ee Afrika wuxuu ahaa "Alkebulan", oo macnaheedu yahay "Hooyada bini-aadamka ama Jannada Ceeden", waxaan wada ognahay in Afrika ay tahay gogoldhigga aadanaha, laakiin miyaad ogeyd arrintaas Xaqiiqdii waa dhabarka nolosha? … (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: July 12, 2020 08: 08 No Comments
Afrika waa qaaradda kaliya ee meerayaasha meheradda ah oo mideysa 9 biomes oo keliya! Taasi micnaheedu waa 9 nidaamyada Eco-nidaamyada! Magaca Afrika waa ifafaale, wuxuu hoy u yahay 1 bilyan oo qof ...	Akhri wax dheeraad ah
Muujinta jabka ee ragga madow / Afrikaanka ah; jabka ayaa si cad loogu muujiyey ragga madow / Afrikaanka; waa ku filan in laga fiirsado tafaasiisha ugu yar ee lagu qanci karo "Xisaabta, jabka waa jaantusyo go'aankooda lagu saleeyay mabda'a aasaasiga ah oo aan ahayn kala-goynta"
Posted By: KongoLisolowaa: July 5, 2020 03: 22 No Comments
Sidoo kale waa qayb ka mid ah xisaabaadka taas oo suuragelinaysa in la darso oo la go'aamiyo tirooyinkaan. Cilmiga kombiyuutarka, waxaan uga hadlaynaa jabka marka aan tixraacno tikniyoolajiyada ...	Akhri wax dheeraad ah
Midka hore wuxuu noqon doonaa kan ugu dambeeya: Guulihii Madow / Afrikaanku maahan ciyaar qaawan oo la raadsado; aad ayey uga badan yihiin kuwa kale oo dhan ee ay raacaan; iyo, aan la isticmaali karin, waxay weli ku leeyihiin saameyn aad u weyn dhammaan ilbaxnimada maanta
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 17, 2020 08: 38 No Comments
Guulihii aan gaadhnay qofwalbaa wuu garanayaa, maxaa yeelay qofna sheegan mayo inuu horumariyey iyadoon hal abuurnimada loo sameyn dadka madow / Afrikaanka. Oo markaan tilmaano inaanu ...	Akhri wax dheeraad ah
Mast - Tiyaatarka: habab la maqlo oo lagu barto laguna helo aqoonta dhammaan shuruucda dabeecadda ama afarta shey ee dabeecadaha jira "Barashada xisaabta dhaqameed ee Afrikaanka madow (Madow / Afrikaanka), ayaa loo isticmaali karaa in lagu hago kuwa doonaya inay wax qoraan, wax bartaan, dib u helaan xusuusta taariikheed ee Afrika ”
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 15, 2020 02: 10 No Comments
Sidaa darteed, iyada oo loo marayo ururada ugu sarreeya ee xisaabta madow / Afrika iyo sixirka Mast, laga bilaabo Khnoum ptah illaa kombiyuutarka iyo tababbarka hal abuurka ah ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug12 07: 11